Maanta meeday dumarka miyiga jooga? Sidee loo habeeyey jilayaasha marka la eego sinnaanta jinsiga? Sidee haweenku u xoojin karaan awooddooda wax-qabad iyo xirfadahooda?
Mooc-kan, oo lagu bixiyo 4 luqadood (Faransiiska, Ingiriisi, Isbaanish, Giriig), wuxuu kaa dhigayaa inaad ogaato noocyada kala duwan ee maalgashiga haweenka si loo dhiso oo loo hal-abuuro si wadajir ah. Waxay qeexaysaa hab-dhaqannada shaqada ee abuurista waxqabadyada, ururrada, iyo geynta aqoonta sida loo wadaago tababarka nolosha oo dhan.
Iyada oo ku saleysan walxaha ka soo jeeda cilmiga aadanaha iyo bulshada, Mooc wuxuu ku siinayaa aqoonta, hababka iyo qalabka: si kor loogu qaado horumarinta hindisayaasha, hoggaaminta firfircoonida ka qaybqaadashada iyo abuurista hal-abuuro bulsho. Waxaa lagu muujiyey tusaalooyin la taaban karo oo ay si wadajir ah u soo saareen xubnaha mashruuca NetRaw ee Yurub.
Haweenka iyo miyiga Yurub Diisambar 13, 2021Tranquillus
READ Abuur bakhaar daadinta (60 daqiiqo gudahood)
socdaMadaxtooyada Faransiiska ee Golaha Midowga Yurub
Sidee loo abaabulaa mashruuca kala-guurka xirfadeed ee macnaha guud ee ka hortagga burburka xirfadeed?